Mahatoky amin'ny kely | FJKM Amboniloha
Fahiny ela be, tamin’ny faha-mpanjaka no niseho ny tantara.
« Tovovavy, maromaro niasa teny an-tsaha. Anisan’ireny i Soa.
Hampanambady ny zanany lahy ny mpanjaka
Indro miramila roa nitaingina soavaly, avy nanatona. « Mitondra hafatra avy amin’ny mpanjaka izahay ! ». Samy nampitsahatra ny asany avy ny tsirairay ka tonga nanatona. « Hampanambady ny zanany lahy ny mpanjaka, efa nolaviny avokoa ny zanaka vavin’ireo mpanjaka namana. Manantena hahita vady ho anjanany eto amin’ity tanàna ity izy. Noho izany, antsoina avokoa ny tovovavy rehetra eto an-tanàna ho tonga any an-dapa afaka fito andro. »
Samy niezaka nanao metimety ny tovovavy rehetra.
Navelan’i Soa ny asany, lasa izy nody faingana, nagoniny ny lamba izay nananany, dia izay soa indrindra. Gaga reniny : « Fa maninona no najanonao ny asa ? ». Hanomana ankanjo hihaonako amin’ny Mpanjaka aho ry neny a ! Zaza adala ianao, hoy reniny. Ianao izay mahantra kely ity, ataon’ny mpanjaka inona koa.
Tsy nanaiky anefa i Soa, « Hanambady aho ry neny a, hanambady ny zanaky ny mpanjaka ». Tsy nahaleo doika azy reniny ka dia vitany ny akanjony. Ary indro izy tonga tao an-dapa ny andro fahafito.
Olona izany tao izany, efa ho an’arivony, tovovavy meva sy kanto avokoa.
Nozaraina voan-javatra hambolena
Tsy nivoaka akory ny mpanjaka, hafatra no nalefany. Hozaraina voan-javatra kely iray avy ireto tovovavy. Nasaina notehiriziny tsara sy notandremany toa ny anakandriamaso ary ambolena any an-trano ka rehefa afaka telo volana, izay nahakolokolo ka mahatondra voninkazo tsara indrindra no hofidian’ny mpanjaka.
Nody i Soa, mailamailaka izy, zavatra hainy ny fambolena. Naka vazy tanimanga izay tsara voatra izy. Nasiany izay tany tsara indrindra, nasiany zezika, nataony talaky andro sy mafana tsara, ary namboleny tao ilay voan-javatra kely.
Tsy mba nety naniry ilay voa nafafin’i Soa
Nandeha ny andro, nandeha ny volana, manondraka isan’andro i Soa. Nefa tsy nisy na dia tsimoka aza. Nalahelo izy ary tonga tomany isaky ny mijery ilay vazy foana.
Tonga ny fotoana hiverenana any an-dapa. Tsy manana na dia ravim-boninkazo ho entina aza i Soa.
Tonga tany an-dapa ihany izy, vao teo an-tokontany dia kivy izy, voninkazo izany, meva sy kanto, tena raitra dia raitra ny an’ny sasany. Izy irery no nitondra vazy foana, tsy misy afa-tsy tany. Natahotra izy, ho bedy aho anio hoy ny teniny anakam-po.
Izay aho vao ho tapa-doha
Toa ilay tamin’ny voalohany, tsy nivoaka ny mpanjaka, samy nasainy nametraka ny voninkazony teo amin’ny toerana iray ireto tovovavy dia noroahiny hody. Afa-tsy i Soa sy ny vazy foana teny aminy.
Nivarahontsana izy rankizy, raiki-tahotra, tezitra angamba ny mpanjaka…
Nivoha ny varavaran’efitra, indro ny mpanjaka sy ny mpiambina azy akaiky fa nivoaka. Raiki-tahotra i Soa, nangovitra ny tongony aman-tànany, latsaka tamin’ny tany ilay vazy ary foana tsy manan-kaseho intsony izy.
« Izay aho vao ho tapa-doha, tahaka izay aho nanaraka ny tenin’i Neny, maty aho androany ». Nandohalika izy nitomany niandry izay sazy hahazo azy.
Ianao no tokana nahavatra namboly fahamarinana
Tànana malefaka dia malefaka anefa no nampitraka an’i Soa, no sady namafa ihany koa ny ranomasony. Feno tsiky ny mpanjaka. Tovovavy an’arivony no teto hoy izy, fa ianao no tokana nahavatra namboly fahamarinana. « Masomboly efa nampangotrahiko ireny nozaraina ireny », « nahatoky tamin’ny kely ianao, ary hataoko ho mpanapaka ny be ».
Ry mpanompo tsara sady mahatoky ; nahatoky tamin’ny kely ianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be
Ny fahamarinana, ny hatsaran-toetra, sy ny fitondran-tena mendrika rankizy dia miseho sy hita eny amin’ny zavatra madinika. N’inon’inona ampanaovina anao, aoka hiseho ny fahamendrehanao. Ka rehefa tonga ny farany, Jesoa Tompo hilaza aminao : « Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky ; nahatoky tamin’ny kely ianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be ; midira amin’ny fifalian’ny Tomponao » Matio 25:21
Catégories :	Dimy minitra	/ par AnjGab 10 octobre 2014